Haweenka Puntland oo odoyaasha ka codsaday in dumarka lagu daro Baarlamanka cusub (Dhegeyso) – Radio Daljir
Oktoobar 7, 2013 4:16 b 0
Boosaaso, October 7, 2013 – Haweenka gobolka Bari ee Puntland ayaa ka codsanaya maamulka iyo odoyaasha in ay qayb ku yeeshaan haweenka xubnaha Baarlamanka ee Puntland, xili haatan diyaar garow doorasho laga dareemayo deeganada oo idil.
Odoyaasha dhaqanka oo soo xulaya baarlamanka cusub ee Puntland ayaa haatan samaynaya wada tashiyada lagu soo xulayo xubnaha cusub, waxaana aan muuqan dhaqdhaaq la xiriira in xubno haween ah ay ku soo muuqaan karaan baarlamanka cusub.
Maryman Maxamed Xasan (Gaduudo) oo ah gudoomiyaha? ururka haweenka ee gobolka Bari oo maanta waraysi siisay idaacada Daljir ayaa xustay in ay jiraan haween badan oo aqoon leh, ayna mudantahay in la tix-geliyo haweenka oo ay ku tilmaantay wadaniyiin karti u leh maamulka dalka.
Waxaa ay sheegtay in dadaalka iyo wadatashiyada ay waxgaradku wadaan in lagu daro dumarka si loo helo awood isu dheeli tiran oo Baarlaman isla markaasna dalku yeesho, xiligan oo ay socoto ololihii doorasho ee dalka oo la filayo in ay dhacdo bisha ugu horaysa sanadka ee January.
DHEGEYSO: Gudoomiye Gaduudo waxaa waraystay Aamniga ladan Axmed oo daljir ka tirsan